माओवादीलाई सभामुख पद फापेन, अग्नि सापकोटा अर्को महरा बन्ने पक्का, यस्तो छ तयारीNepalpana - Nepal's Digital Online
माओवादीलाई सभामुख पद फापेन, अग्नि सापकोटा अर्को महरा बन्ने पक्का, यस्तो छ तयारी
बाह्रबिसे । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कु–कर्मले गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छिटै जाल जाने अवस्था आउन लागेको खुलासा गरेका छन् ।
गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका– २ कर्थलीमा शुक्रबार श्री देक्षण कैसुङ छ्योलिङ्ग गुम्बा शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा अग्नि सापकोटा जले जाने बताए । ‘अग्नि सापकोटाजीले धेरै अपराधहरू गर्नुभयो । उहाँलाई अर्जुन लामा हत्या प्रकरण पनि बाँकी छ’, नेता बस्नेतले भने, ‘उहाँ (अग्निप्रसाद सापकोटा)ले सरकारी जग्गा धेरै ठूलो संख्यामा कीर्ते गरेर जबरजस्ती हडप्ने काम भएको छ ।’ बस्नेतले भने, ‘सरकारी जमीन उहाँका मान्छेको नाममा पास गरिएको छ ।
अग्निप्रसाद सापकोटाजीको कु–कर्मको कारणले उहाँ चाँडै जेल जाँदै हुनुहुन्छ ।’ ‘यो पनि अचम्म नहोला । यो चाँडै भयो फेरि । अपराध गरेपछि अपराध त कराउँछ कराउँछ । गाउँमा चलन छ । पाप धुरीबाट कराउँछ । कराउँछ कराउँछ पाप’, कांग्रेस नेता बस्नेतले भनेका छन् । उनले भने, ‘अग्नि सापकोटा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् ।
काभ्रेको अर्जुन लामा हत्या गरेको काण्डमा उनको मुद्धा बाँकी नै छ । नेताहरू अपराधी हुनु भएन ।’ कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहेका बेला रोशनी शाहीले यौनदुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि सभामुख पद गुमाएर दशैँको मुखमा जेलमा बस्नु परेको थियो । महराले लामो समयपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट सफाइ पाएका छन् ।
कांग्रेस नेता बस्नेतले केपी ओलीले मनपरी गरेका कारण दुईतिहाइको सरकार ढलेको बताए । ‘केपी ओलीको पार्टी नै फुट्यो । एमाले, के–के माले, झाले पार्टी बनेका छन् । त्यस्ता छ गोरुका नाम हुन्थे’, उनले भने, ‘गोरुको नाम जस्तै अहिले कम्युनिस्ट त्यस्ता भएका छन् ।’ ‘चुनाव आउँदै छ । भोट कांग्रेसलाई दिनुपर्छ । विकासको जिम्मा कांग्रेसले लिन्छ । जनताले कांग्रेसलाई भोट दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीमा पनि कमजोरी होला । सुध्रिनुपर्छ । जनताको मत लिएर गएपछि जनताको काम गर्नुपर्छ ।’ ‘ठोकर्पामा एउटा कार्यक्रममा पत्रकारले सरकार कसको बन्छ ? को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्थे ।
त्यस बेला नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने भनेको गोरु ब्याउने जस्तै हो’, उनले भनेका छन् । ‘त्यस कारणले नेपालमा गोरु नै ब्याउँछ भनेको थिएँ । गोरु ब्याउँछ भनेको कांग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति बन्नु हुन्छ भनेको हो । नभन्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो’, उनले भनेका छन् ।
‘जनताले भोट कांग्रेसलाई हालेनन् । बहुमत कम्युनिस्टलाई दिए । दुईतिहाइको बहुमतको सरकार बन्यो । सरकार त बन्यो । भ्रष्टाचारमा लिप्त भए’, उनले भने, ‘अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्न खोजे । निरंकुश शासन गर्न खोजे । आफ्नै पार्टीभित्रको मान्छेलाई तेजोबध गर्न थाले । जनताको भोटको कदर गर्न सकेनन् । त्यसपछि कम्युनिस्टहरू लथालिङ्ग, भताभुङ्ग बने ।’ उनले भने, ‘कम्युनिस्टहरूले यो देश चाउन सकेनौँ । केपी ओलीले यो देश सिध्याए । शेरबहादुर देउवालाई अब तपाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर बुढानिलकण्ठ गएको सबैले देखेका छन् ।’
‘जनताले भोट कम्युनिस्टलाई हाले । कम्युनिस्टका नेताले भोट कांग्रेसका नेतालाई हाले । दलाली बीचमा किन गर्ने ? विकास चाहिन्छ भने भोट कांग्रेसलाई हाल्नुपर्छ’, कांग्रेस नेता बस्नेतले भनेका छन् । ‘कम्युनिस्टले धर्म र संस्कृति मान्दैमान्दैन ।
यिनीहरू नेपालमा पनि मठमन्दिर भत्काएर हिँड्ने हुन्’, उनले भने, ‘धर्म भनेको अफिम हो भन्ने कम्युनिस्टले ठूलो टीका लगाउँछन् । प्रचण्डले टीका लगाएका छन् ।’ उनले भने, ‘बत्तीबाल्न, स्कुल बनाउन, दलित, बाटो, खानेपानीका लागि कांग्रेस चाहिन्छ । भोट कम्युनिस्टलाई दिने । विकास कांग्रेसले गरोस् भन्ने देखिएको छ । अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई भोट दिनुस् । रुख चिन्हमा भोट हाल्नुस् ।’
कर्थलीमा निर्माणाधीन श्री देक्षण कैसुङ छ्योलिङ्ग गुम्बा निर्माणका लागि नेता बस्नेतको पहलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट रु.२४ लाख रकम विनियोजित भएको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतले गुम्बाको शिलन्यास पनि गरेका छन् । कार्यक्रममा क्षेत्रीय सभापति बालकृष्ण बस्नेतसहितका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
भाद्र १२, २०७८ शनिवार ०८:०७:३७ बजे : प्रकाशित